Daboolada wejiga iyo maaskarayaasha | Face coverings and masks | Unite against COVID-19
Daboolada wejiga iyo maaskarayaasha | Face coverings and masks
Daboolada wejiga Digniinta Heerka 1
Markaad gurigaaga ka tegayso
Waxaanu kugu dhiirigelinaynaa inaad xidhato daboolka wejiga marka aanad ilaalin karin fogaan inaad u jirsato kuwa kale, tusaale ahaan meelaha gudaha ah ee cidhiidhiga ah.
Sharci ahaan waa inaad xidhataa daboolka wejiga marka:
guudka gaadiidka dad waynaha
Markaad shaqada joogto
Sharci ahaan waa inaad xidhataa daboolka wejiga haddii aad tahay darawalka:
tagsi ama baabuurka raacida la wadaago
gaadiidka dad waynaha.
Daboolada wejiga Digniinta Heerka 2
aad isticmaalayso gaadiidka dad waynaha, diyaaradaha (ay ku jiraan goobaha laga soo dego iyo laga baxo sida istaanka tareenka iyo goobaha basku istaago) iyo gudaha tagsiga ama baabuurka raacida la wadaago.
aad booqanayso xarunta daryeelka caafimaadka ama goobta waayeelka lagu daryeelo.
gudaha ganacsiyada tafaariiqda, sida subarmaarkadka, farmasiiyada, dukaanada waa wayn ee moolalka, suuqyada gudaha ah, dukaanada cuntada safaariga lagu qaado, iyo dhismayaasha dad waynaha, sida carwada iyo maktabadaha.
booqashada aagaga dad waynaha gudaha maxkamaddaha iyo maxkamaddaha cadaalada, wakaaladaha dowladda hoose iyo dowladda dhexe, iyo adeeg bixiyayaasha adeega bulshadda ee miisaska adeega macmiilka.
Sharci ahaan waa inaad xidhataa daboolka wejiga haddii aad:
ka shaqayso aaga dadka lagu la qaabilo ee maxkamadda, maxkamadda cadaalada, wakaalada dowladda hoose ama dhexe ama adeeg bixiyaha adeega bulshadda.
aad tahay darawalka alaabta u qaado cinwaanada guryaha la degen yahay — darawalka alaabta la diro keliya waxaad u baahan tahay daboolka wejiga marka ay ka degeen baabuurka.
aadka shaqayso makhaayada bunka, makhaayada cuntada, baarka, naadiga habeenka, kijada quudinta saboolka ama ganacsi kale oo cunto ama cabbitaan gudaha doorka macmiilka-lagu jeesanayo.
aad ka shaqyaso adeega xidhiidhka — tusaale, hagaajinta timaha ama khabiirka qurxinta.
aad ka shaqayso dukaanka tafaariiqda — ay ku jiraan kuwan ka hawl galaya xaga Heerarka Digniinta 3 iyo 4.
aad ka shaqayso gudaha xarunta dad waynaha — tusaale ahaan, maktabad, carwo ama jiim — shaqaalaha ka shaqaynaya berkada dabaashu uma baahna inay xidhaan daboolka wejiga.
aad tahay darawal tagsi, baabuurka raacida la wadaago, baska badda, baska ama tareenka loo isticmaalo gaadiidka dad waynaha — tan waxaa ka reeban basaska dugsiga iyo basaska badda inta u dhaxaysa North Island iyo South Island.
Daboolada wejiga Digniinta Heerka 3
Waxaanu kugu dhiirigelinaynaa inaad xidhato daboolka wejiga oo aad u jirsato 2 mitir dadka kale marka aad ka baxayso guriga. Gaar ahaan haddii ay adag tahay in la ilaaliyo fogaanta loo jirsanayo kuwa kale. Tusaale ahaan, marka aad soo qaadanayso cuntadda safaariga ah ee la qaato.
guudka gaadiidka dad waynaha iyo goobaha la yimaado ama laga baxo, tusaale ahaan garoomada diyaarada, istaanada basaska iyo goobaha basku istaago.
gudaha tagsi ama baabuurka raacida la wadaago
aad booqanayso xarunta daryeelka caafimaadka
aad booqanayso xarunta waayeelka lagu daryeelo
aad tahay macmiil ama macmiilka ganacsiga ama adeega ka hawl galaya heerarkan, tusaale ahaan dukaanada subarmaarkadka, farmasiiyada iyo kaalmaha shidaalka.
sharci ahaan waa inaad xidhataa daboolka wejiga haddii aad tahay shaqaalaha ku lugta leh la xidhiidhka macmiilka ee ganacsiga ama adeega ku hawlgalaya Heerka Digniinta 3. Waa inaad xidhataa daboolka wejiga haddii aad ka shaqayso:
xaga subar maarkadka, goobta caanaha, kaalinta shidaalka, wakaalada ruqsad siinta, farmasiiga, kaydka cuntadda, adeega iskaa dharka loo dhaqdo, dukaanka alaabooyinka, hiliblaha, kalluun iibiyaha, iibiyaha dukaanka booshariga, moolka wax laga iibsado, baanka ama xaga Boostadda New Zealand.
gudaha aaga dadka lagu la qaabilo ee maxkamadda, maxkamadda cadaalada, ma adeeg bixiyaha adeega bulshadda.
aad tahay darawalka alaabta u qaado cinwaanada guryaha la degen yahay — keliya waxaad u baahan tahay daboolka wejiga marka aad ka degto baabuurkaaga.
darawal tagsi ahaan, baabuurka raacida la wadaago, baska badda, baska ama tareenka loo isticmaalo gaadiidka dad waynaha — uma baahnid inaad xidhato daboolka wejiga markaad saaran tahay basaska dugsiga iyo basaska badda inta u dhaxaysa North Island iyo South Island.
Daboolada wejiga Digniinta Heerka 4
sharci ahaan waa inaad xidhataa daboolka wejiga haddii aad tahay shaqaalaha ku lugta leh la xidhiidhka macmiilka ee ganacsiga ama adeega ku hawlgalaya Heerka Digniinta 4. Waa inaad xidhataa daboolka wejiga haddii aad ka shaqayso:
xaga subar maarkadka, goobta caanaha, kaalinta shidaalka, wakaalada ruqsad siinta, farmasiiga, kaydka cuntadda, adeega iskaa dharka loo dhaqdo, dukaanka alaabooyinka.
darawal tagsi ahaan, baabuurka raacida la wadaago, baska badda, baska ama tareenka loo isticmaalo gaadiidka dad waynaha — uma baahnid inaad xidhato daboolka wejiga markaad saaran tahay basaska badda inta u dhaxaysa North Island iyo South Island.
Kumaan u baahanayn inuu xidho daboolka wejiga?
Waxaanu garanaynaa dadka qaarkood oo naafo ah ama xaalada caafimaad qaba inaanay u xidhan karin daboolka wejiga si badbaado leh ama raaxo leh. Fadlan ku baraarugsanow tan. Weli waxay xaq u leeyihiin cunto, farmashiiyada iyo adeegyada kale.
Halka ay suuragal tahay, waxaa lagugu dhiirigelinayaa inaad xidhato daboolka wejiga.
Daboolka wejiga uma baahna in la xidho:
Carruurta ka yar 12
ardayda saaran basaska dugsiga
adeegyada markabka bada ee sida rakaabka meeshau dhaxaysa North iyo South islands
guudka doonta ama markabka aan lahayn meel ku soo xidhan rakaabka, tusaale ahaan safarada doonta jatka ah.
safarka la wada baxo ama kooxeed
guudka duulimaadyada gaarka ah
darawadala, bayloodada, shaqaalaha ama sahqaalaha markabka ee adeega haddii ay joogaan meel laga gaar yeelay rakaabka, tusaale ahaan, bayloodada ku jirta qolka duulinta diyaarada ama wadayaasha tareenka ee ku jira qolka laga wado tareenka.
Sidoo kale uma baahnid inaad xidhato daboolka wejiga haddii:
Aanay badbaado ahayn, tusaale ahaan xishashada mid waxay la macno tahay darawalka si badbaado leh uma wadi karo baabuurka.
waxaa jira gurmad
waxaad qabtaa jiro jidhka ama maskaxda ah ama xaalad ama naafanimo kaa dhigta inaad xidhato daboolka wejiga mid aan kugu habboonayn.
waxaad u baahan tahay inaad cadayso aqoonsigaaga
waxaad u baahan tahay inaad qof la xidhiidho kaas oo dhegoole ah ama maqalku ku adag yahay
waxaad u baahan tahay inaad dawo qaadato
waxaad u baahan tahay inaad wax cunto ama cabto, haddii aad cunayso ama cabayso caadi ahaan waa la oggol tahay
sharcigu uma baahna.
Kaadhka ka reebanaanta daboolka wejiga
Waxaanu garanaynaa dadka qaarkood oo naafo ah ama xaalada caafimaad qaba inaanay u xidhan karin daboolka wejiga si badbaado leh ama raaxo leh. Haddii aanad xidhan karin hal, waxaad heli kartaa kaadhka ka reebanaanta. Waxaad tusi kartaa kaadhkaaga ka reebanaanta marka loo baahdo.
Waxaad kaadh ka codsan kartaa Disabled Persons Assembly NZ addoo kala soo xidhiidhaya 04 801 9100 ama iimaylka info@dpa.org.nz.
Sida loo xidho daboolka wejiga
Hubi waji daboolidaada. Si aad u xaqiijiso inay tahay
oo aan dilaacsanayn.
Nadiifi gacmahaaga. Ka hor inta aad taabanin waji daboolkaaga, nadiifi oo qalaji gacmahaaga. Isticmaal midkood
Saabuun iyo biyo
Gacan nadiifiye (ugu yaraan aalkolo 60%).
Gasho waji daoboolkaaha. Gali waji daboolkaaga sanka iyo afka korkooda, kadib dhuuji oo ku xir xargaha. Waji daboolka waa in
si buuxda u dabool sankaaga, afkaaga iyo garkaaga
si fiican ula ekeysii, laakiin ammaan ahaan ah, dhinaca ku soo jeeda wajigaaga
oo ku ogolaanaya inaad si fudud u neefsato.
Waxaad isticmaali kartaa mar kale, Isticmaal midkood:
Inta aad xiran tahay waji daboolka
Marka aad xiranayso waji daboolka waa inaad:
ha taabanin qeybta hore ee waji daboolkaaga
ha taabanin wajigaaga
ka fogow inaad dhaqaajiso waji daboolkaaga, oo ay ku jirto riixida
beddel waji daboolka haddii u wasaqoobo, dilaaco ama waxyeeloobo.
Sida la isaga siibo waji daboolka
Nadiifi gacmahaaga. Nadiifi oo qalaji gacmahaaga. Isticmaal midkood:
Gacan nadiifie (ugu yaraan aalkolo 60%).
Iska bixi waji daboolkaaga. Iska saar waji daboolkaaga oo ka sib wajigaaga. Isticmaal xargaha oo fur. Ha taabanin qeybta hore waji daboolkaaga, ka taxadar in aad taabato sankaaga, ama afkaaga.
Nadiifi ama tuur waji daboolkaaga.
Nadiifi marada waji daboolka adiga ku dhaqaya makiinada dharka oo leh saabuun iyo 60 digrii oo heerkulkeedu yahay. U qalaji si buuxda daboolka wejiga ka hor inta aanad mar labbaad isticmaali. Ha isticmaal waji daboolka la tuuray.
Tuur waji daboolka halka mar la isticmaalay. Ku rid baaldiga qashinka o oleh furka lagu xiro, ama bacda shabadaysan oo tuur. Dib ha u isticmaalin ama ha isku dayin inaad jeermiska ka disho waji daboolka isticmaalka-halka.
Nadiifi gacmahaaga mar kale. Isticmaal midkood: